Nezvedu - Anhui Lihua Wood rinoumba Co., Ltd.
Anhui Lihua Wood rinoumba Co., Ltd. ndiyo High uye New Tech. Enterprise, inovhara ne15,000 sq metres chirimwa, iri muLangxi maindasitiri paki, panosangana Anhui, Zhejiang uye Jiangsu dunhu, kunakirwa nyore kuwana kukuru kwekufambisa network. Yedu fekitori inobatanidza kuronga, kutsvagisa, kushambadzira uye kushandiswa kwehuni mapurasitiki anoumbwa nezvinhu nekugadzira.
Tine makumi maviri nemana ekugadzira mitsara neyegore kugadzirwa kwemakumi maviri ematani matani, ayo anovimbisa akatsiga uye panguva yakakodzera zvigadzirwa zvinopa.Our main zvigadzirwa zvinosanganisira: WPC decking, WPC madziro kuputira, WPC fenzi, WPC handrail, WPC pergola, WPC ruva hari uye WPC bhenji uye pavilion. Mhando dzese dzezvinhu zvinogadzirwa neyakaomarara QC maitiro.
Isu tine QC timu ine makore anopfuura matatu ruzivo mumunda. Izvo zvigadzirwa zvinoongororwa mune yega yega maitiro. Mamwe acho anoedzwa neyechitatu bato. Zvakare isu tinosuma ERP akangwara mhando kutonga uye yekugadzira system. Zvese zviri pachena uye zvinodzorwa kubva padanho kuenda kune rimwe. Kunyanya isu tiri vashandi vemunharaunda, vanga vachishanda pano kwemakore akati wandei vane ruzivo rwekugadzira zvirinani. Main mainjiniya ave achishanda pazvinhu zvinopfuura makore gumi.
Tine timu yekutengesa yemisika yekumba neyekunze. Isu tinotarisisa kushambadzira, zvigadzirwa zvitsva uye tekinoroji, ramba uchichinja uye kuyedza pane hunyanzvi uye zvigadzirwa zvitsva.Tine vechidiki uye vane simba timu timu ine mhinduro yekukurumidza uye kugona kwakanaka kwekutaurirana.
Vatengi vedu vanobva kuEurope, North America, South America, Africa, Middle East neAsia. Lihua zvigadzirwa zvakaedzwa neSGS neEU WPC mhando yekudzora standard EN15534-2004, EU moto chiyero Standard neB moto moto giredhi uye American WPC standard ASTM. Zvakare isu takavimbiswa neIS09001-2008 Quality Management System, ISO14001: 2004 Environmental Management System, FSC uye PEFC. Welcome kushanyira fekitari yedu.
Zvakanakira:Zvigadzirwa zvedu zvine mhando yakanaka uye kiredhiti kwatiri kuti tigone kumisikidza akawanda mahofisi ebazi uye vanogovera munyika medu.
Technology:Isu tinopfuurira mune hunhu hwezvigadzirwa uye nekudzora zvakanyanya maitiro ekuburitsa, akazvipira kugadzirwa kwemarudzi ese.
Sevhisi:Kunyangwe iri pre-sale kana mushure-kutengesa, isu tinokupa iwe neakanakisa sevhisi kukuzivisa iwe uye kushandisa zvigadzirwa zvedu nekukurumidza.
Chinangwa chisikwa:Iyo kambani inoshandisa epamberi dhizaini masisitimu uye kushandiswa kwepamberi ISO9001 2000 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi.
Kwakanaka mhando:Iyo kambani inoshanda mukugadzira michina yemhando yepamusoro, yakasimba simba rehunyanzvi, kugona kwakasimba kugona, akanaka masevhisi masevhisi.
Strong hwokugadzira chikwata:Isu tine yakasimba timu yehunyanzvi muindastiri, makumi emakore ehunyanzvi ruzivo, yakanakisa dhizaini dhizaini, ichigadzira yepamusoro-soro yepamusoro-inoshanda akangwara michina.
Kunze WPC decking, WPC rinoumba decking, WPC yekunze decking, WPC uriri, WPC decking uriri, huni mapurasitiki ematongerwo decking,